MAMPIASA NY DRIVER VERIFIER HANAMBOARANA IREO LESOKA TAMIN'NY BLUE SCREEN OF DEATH (BSOD) - MALEMY
Mampiasa ny Driver Verifier hanamboarana ireo lesoka tamin'ny Blue Screen of Death (BSOD)
Driver verifier dia fitaovana Windows izay natao manokana hisamborana ireo bitsika mpamily fitaovana. Ampiasaina manokana izy io mba hahitana ireo mpamily nahatonga ny fahadisoan'ny Blue Screen of Death (BSOD). Ny fampiasana ny Driver verifier no fomba tsara indrindra hampihenana ny antony fianjerana BSOD.
Mampiasa ny Driver Verifier hamahana ny lesoka amin'ny Blue Screen of Death (BSOD):
Fahadisoana izay azo amboarin'ny Driver Verifier:
Ny mpamily verifier dia ilaina ihany raha afaka miditra ao amin'ny Windows ianao fa tsy amin'ny fomba azo antoka satria amin'ny fomba azo antoka ny ankamaroan'ny mpamily default dia tsy entina. Avy eo, alao antoka fa hamorona teboka System Restore.
ZAVA-DEHIBE: Hamarino tsara fa novonoinao ny verifieran'ny mpamily tamin'ny fomba azo antoka raha vantany vao vitanao ny nampiasa azy. Avy amin'ny maody azo antoka, sokafy cmd miaraka amin'ny zon'ny administrativa ary soraty ny baiko verifier / avereno (tsy misy teny nalaina) avy eo dia tsindrio enter mba hampijanona ny mpanamarin-tsoroka.
Alohan'ny handrosoana dia alao antoka fa mamela ny Minidumps. Minidump dia rakitra iray mitahiry fampahalalana mitsikera momba ny fianjerana Windows. Raha atao teny hafa, isaky ny rava ny rafitra misy anao, dia voatahiry ao amin'ny fisie minidump (DMP) . Ity rakitra ity dia manakiana amin'ny famaritana aretina
ny rafitrao ary azo ampiasaina ho:
Mpanampy fanavaozana ny varavarankely 10 niraikitra tamin'ny 99
a. Tsindrio Windows Key + R avy eo soraty sy-bbt.cpl ary hiditra.
b. Safidio ny Takelaka mandroso ary tsindrio ny Settings eo ambanin'ny Startup and Recovery.
d. Hamarino tsara izany Mandrosoa ho azy dia tsy voamarina.
d. Safidio izao Fanariana fahatsiarovana kely (256 KB) eo ambanin'ny lohateny fanoratana debugging information.
e. Raha mampiasa Windows 10 ianao dia ampiasao fanalana fahatsiarovana mandeha ho azy.
f. Farany, alao antoka fa voatanisa ao ny lahatahiry fanariana kely % systemroot% Minidump
g. Atsaharo ny PC-nao.
1. Midira ao amin'ny Windows anao ary manorata cmd ao amin'ny bara fikarohana.
2. Avy eo tsindrio havanana eo amboniny ary safidio Mihazakazaha Administrator.
3. Ankehitriny soraty ity baiko manaraka ity amin'ny cmd ary kitiho ny fidirana:
4. Zahao ilay boaty Mamorona fikirana manokana (ho an'ireo mpamorona kaody) ary avy eo tsindrio Manaraka.
rafitra serivisy ankoatra ny serivisy Windows 8.1 manamboatra
5. Safidio ny zava-drehetra afa-tsy Fanahafana loharanom-pahalalana ambany SY Fanamarinana ny fanarahan-dalàna DDI .
6. Manaraka, safidio Misafidiana anarana mpamily amin'ny lisitra iray boaty ary kitiho ny Manaraka.
7. Safidio ny mpamily rehetra afa-tsy izay omen'ny Microsoft.
8. Farany, kitiho farany hihazakazaka ny verifier ny mpamily.
9.Ataovy antoka fa mihazakazaka ny mpanamarina mpamily amin'ny alàlan'ny fanoratana ity baiko manaraka ity amin'ny admin cmd:
10.Raha mandeha ny mpanamarina dia hamerina ny lisitry ny mpamily.
11.Raha tsy mihazakazaka indray ny mpanamarina ny mpamily dia araho ireo dingana etsy ambony.
12. avereno indray ny PC-nao ary tohizo ny fampiasanao ny rafitrao mandra-pikatony. Raha zavatra manokana no nateraky ny fianjerana dia alao antoka fa hanao izany hatrany hatrany.
Fanamarihana: Tanjona lehibe amin'ny dingana etsy ambony dia ny tadiavinay ny fianjeranay satria ny mpanamarin-dàlana amin'ny mpamily dia manasongadina ireo mpamily ary hanome tatitra feno momba ny fianjerana. Raha tsy potika ny rafitrao dia avelao ny verifier ny mpamily hihazakazaka mandritra ny 36 ora alohan'ny hijanonany.
13.Farany, rehefa vita ny ampiasao ny boot de verifier an'ny mpamily amin'ny mode safe. (Alefaso eto ny menio boot boot taloha).
14.Sokafoy ny cmd miaraka amin'ny ankavanana admin ary soraty ny verifier / reset ary kitiho ny enter.
15. Ny antony manosika ireo dingana etsy ambony dia ny hahafantarantsika izay mpamily mamorona ny BSOD (Blue Screen of Death).
16.Raha vao tafavoaka tamim-pahombiazana ny lesoka tamin'ny rakitra fitadidiana fahatsiarovana (vita ho azy izany rehefa nianjera ny PC), ampidino fotsiny ary apetraho ilay programa antsoina hoe BlueScreenView.
17. Load ny Minidump na Fialana fahatsiarovana rakitra avy amin'ny C: Windows Minidump na C: Windows (mandalo ny .dmp fanitarana ) miditra BlueScreenView.
18. Manaraka izany, ho azonao ny mombamomba ny mpamily izay mahatonga ny olana, apetraho fotsiny ny mpamily ary halamina ny olanao.
windows 10 boot error 0xc00000f
19.Raha tsy fantatrao ny momba ny mpamily manokana dia mikaroha google hahafantarana bebe kokoa momba azy.
20. Atsaharo ny solosainao mba hamonjy ireo fanovana rehetra nataonao.
DRIVER_VERIFIER_DETected_VIOLATION (Fanamarihana ny mpamily ny mpamily)
KERNEL_SECURITY_CHOCK_FAILURE (Tsy fahombiazan'ny fanamarinana ny fiarovana an'i Kernel)
DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION (Driver Verifier Iomanager Violation)
DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL (Fanalalana kolikoly amin'ny mpamily)
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (Tsy fahombiazan'ny fanjakana mpamily)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (Fahadisoana tsy nikirakira ny KMODE Exception)
Error amin'ny efijery NTOSKRNL.exe Blue Screen of Death (BSOD)
Eny, izao no faran'ny Mampiasa ny Driver Verifier hanamboarana ireo lesoka tamin'ny Blue Screen of Death (BSOD) torolalana fa raha mbola manana fanontaniana ianao manoloana an'ity olana ity dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
google chrome cpu fampiasana spikes windows 10
windows 10 fampitandremana fahatsiarovana ambany
tsy afaka manavao ny windows 10
ampio gpedit ao an-trano Windows 10
google chrome mampiasa cpu be loatra